Mpempe akwụkwọ ịchọ mma TPU na -agbaze agbaze
A na-akpọkwa ihe nkiri ịchọ mma ihe nkiri dị elu na nke dị ala n'ihi ịdị mfe ya, dị nro, na-agbanwe agbanwe, akụkụ atọ (ọkpụrụkpụ), dị mfe iji na njirimara ndị ọzọ, a na-ejikarị ya akwa akwa dị iche iche dịka akpụkpọ ụkwụ, uwe, akpa, wdg. Ọ bụ nhọrọ ntụrụndụ na ejiji ...
Ihe nkiri a na -ebipụta bụ ụdị ihe eji ebipụta uwe na -adịghị mma na gburugburu ebe obibi, nke na -achọpụta nnyefe ọkụ nke ụkpụrụ site na ibipụta na ịpị ọkụ. Usoro a dochie mbipụta ihuenyo ọdịnala, ọ bụghị naanị adaba ma dịkwa mfe iji rụọ ọrụ, kamakwa ọ naghị egbu egbu na enweghị isi ....
Mpempe akwụkwọ ozi na -agbaze agbaze
Ihe nkiri ịse ihe bụ ụdị ihe na -ebipụ ederede ma ọ bụ ụkpụrụ achọrọ site na ịkpụpụta ihe ndị ọzọ, wee kpoo ọdịnaya a pịrị apị na akwa ahụ. Nke a bụ ihe ihe eji eme gburugburu ebe obibi, enwere ike ịhazi obosara na agba. Ndị ọrụ nwere ike iji ihe a mee pr ...
Teepu akara mmiri na-enweghị mmiri maka uwe
A na -eji eriri mmiri na -enweghị akwa na akwa ma ọ bụ ngwa dị n'èzí dị ka ụdị teepu maka ọgwụgwọ akwa mmiri enweghị mmiri. Ugbu a, ihe anyị na -eme bụ pu na akwa. Ka ọ dị ugbu a, usoro nke itinye eriri mmiri na -ejikọ na ọgwụgwọ nke seams na -enweghị mmiri abụrụla nke a ma ama ma nabata ebe niile ...
Teepu akara PEVA maka akwa nchekwa nwere ike ịtọpụ
Ngwaahịa a bụ ngwaahịa anyị kacha ere kemgbe ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ na 2020. Ọ bụ ụdị eriri mmiri PEVA nke ejiri ihe mejupụtara, nke a na-eji maka ọgwụgwọ mgbochi mmiri n'akụkụ akwa uwe nchebe.Ndị nkịtị anyị na-eme obosara 1.8 cm na 2cm, ọkpụrụkpụ 170 micron. Tụlee ...
Ngwaahịa a bụ ngwaahịa anyị kacha ere kemgbe ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ na 2020. Ọ bụ ụdị eriri mmiri PEVA nke ejiri ihe mejupụtara, nke a na-eji maka ọgwụgwọ mgbochi mmiri n'akụkụ akwa uwe nchebe. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere PU ma ọ bụ akwa na-eyi akwa, ọ nwere ọnụ ahịa dị ala karịa ...
H&H Car ihe nkiri na -echebe agba
H&H gbara mbọ maka mmepe na imepụta ihe nkiri TPU ụgbọ ala na-echebe agba. Ụlọ ọrụ anyị dị na Anhui Province, China, na -ekpuchi mpaghara puku mita 20,000, ya na ndị otu R&D anyị na ntọala mmepụta. Ọzọkwa, akụrụngwa mmepụta na nnwale anyị ...